I-Psoriasis ingenye yezifo zesikhumba ezingathinteka kakhulu, futhi kwenzeka kaningi. I-psoriasis ngokuvamile ivela ngenxa yokucindezeleka, ukucindezeleka kwengqondo, ukuthatha noma imiphi imithi, izifo ezithathelwanayo. Iningi labantu abanengozi ye-psoriasis yizingxenye zomzimba ezifana nekhanda, ama-elbows, sacrum namadolo. Uma kwenzeka isifo, indawo ethintekile ihlanganiswe nezindawo ezibomvu zamasayizi ahlukene kanye nezikali zesiguli. Lesi sifo sisakazeka ngokushesha, kepha lowo muntu akazwa ubuhlungu noma akanandaba. Ukwelashwa kwe-psoriasis ngemithi akusebenzi ngaso sonke isikhathi. Ukwelashwa kwalesi sifo, noma okungenani ukuvimbela ukusabalala okusheshayo kungaqaliswa ngokusebenzisa amakhambi omuntu, esizokutshela kulesi sihloko esithi "I-Psoriasis: izindlela zokwelapha zabantu."
Ngaphambi kokusebenzisa izindlela zabantu zokuqeda i-psoriasis, kufanele nakanjani uthintane nodokotela wakho.
Izindlela ezingezona zendabuko zokwelashwa zingasetshenziswa noma ngabanye noma zihlangene. Zonke zifinyeleleka kalula futhi azibangeli inkathazo enkulu lapho upheka. Lesi sifo asihambisani nhlobo, kodwa abantu abaningi abavelele kuso bavele becindezelekile ngenxa yokuzizwa kwengqondo yokugula. Kunzima ukuphulukisa i-psoriasis, kodwa okokuqala udinga ukunciphisa nokuyeka ukusakazeka kwesifo kuwo wonke umzimba. Kulokhu, ukupheka kwemithi yendabuko kudalwe, ukubuyekezwa okuzoqala manje.
I-Psoriasis: izindlela zokuphulukisa.
Lona ukwelashwa okudume kakhulu kwe-psoriasis. Kusukela ezimpandeni zayo ezintsha udinga ukukhipha ijusi bese ugcoba indawo enkulu kakhulu. Kodwa izimbali kumelwe zibe zihlanzekile ngempela, ngakho ukusetshenziswa kwe-celandine ebusika akunakwenzeka. Ngemuva kwezinyanga ezintathu zasehlobo, ungasebenzisa amanye amakhambi omuthi nemithi, kanti ehlobo ezayo ukuqala ukwelashwa nge-celandine. Into eyinhloko yukuthi ayikho impendulo yokwelapha emithini yokwakheka kwezokwelapha.
Ukwelashwa kwe-tar kuphelele kulabo abasanda kuqala ukuthuthukisa izindawo ze-psoriasis ngenxa yokucindezeleka okukhulu. Kule nkinga iresiphi enjalo yabantu izosebenza kakhulu. I-Birch tar (ungayithenga kunoma iyiphi ikhemisi) ifakwa emathini bese ishiya ihora nehafu. Khona-ke ungakwazi ukugeza, bese uphatha ama-stain nge-celandine. Into esemqoka, ungasula lutho, isixazululo kufanele sithathwe. Ngesikhathi esifanayo, kukhishwa iphunga elibukhali kakhulu, kepha akufanele lilalele, ngoba uma wenza lokhu ngendlela efanayo namasonto amabili, ungakhohlwa ngama psoriasis ngokuphelele.
Imbewu yempuphu ilula kakhulu, ifinyeleleke kalula futhi iphumelele. Angatholakala nganoma yisiphi isikhathi sonyaka. Kumele baphathwe ngokuwaqothula okuluhlaza. Ukwelashwa okunjalo ngeke kusetshenziswe kuphela, kodwa futhi kujabulise.
Ngokulinganayo ngokuhambisana nesikhathi yisikhambi neklabishi brine. Ukuze wenze lokhu, i-brine kufanele ihambelane ngamanzi amaningi bese ulinda kuze kube yilapho idle ngokuphelele. Emva kwenqubo, kuyinto efiselekayo, izinsuku eziningi ngangokunokwenzeka, ukugwema ukugeza (kungabandakanyi izinqubo zokuhlanzeka). Izinsuku ezingaphezu komzimba ngeke zivezwe ekuhlanjeni, kungcono ukulwa ne-psoriasis. Uma uphathwa ngokuqhubekayo, emva kwezinyanga ezingu-1, 5-2 ungafinyelela ekutholeni okuphelele kulesi sifo.
Usawoti wethebula, u-anyanisi ne-celandine.
Ngokuvamile kusiza ngokuphathwa kwe-psoriasis ejwayelekile ithebula usawoti. Ukuze wenze lokhu, gcwalisa ukugeza okugcwele ngamanzi afudumele bese uphelela kuyo ingxenye yesigamu sikasawoti. Isiguli sifinyelela emanzini, njalo sibopha ikhanda, futhi. Ngemuva kokuba kwenziwe inqubo enjalo yokusula akudingekile, usawoti kufanele utholakale emzimbeni. Ngemuva kokuba isiguli sesomile wonke umzimba, kuhlanganise nekhanda, qhubeka nenqubo elandelayo.
Emzimbeni owomile kudingekile ukuphoqa isibani, sibheke nge-grinder yenyama. Kufanele ifakwe emzimbeni wonke, kufaka phakathi ikhanda. Ngemuva kokuba isiguli sesivela kulesi simiso imizuzu engama-20, anyanisi aqala ukususwa ngendwangu oyinyumba noma i-gauze. Musa ukugeza umzimba nganoma iyiphi indlela, ukuze ususe zonke izingxenye eziwusizo ozitholayo. Yiqiniso, kokubili ukuzwa nokuphunga kushiye okuningi, kodwa isiguli kufanele silwele, ngokushesha ngangokunokwenzeka, ukuze siphumelele kulokhu kugula okuqede. Emva kwenqubo ye-anyanisi, isiguli kufanele silale.
Lapho nje esukuma, uhlanzwa nge-decoction ye-celandine, engakulungiswa ngokubilisa ama-300 amagremu wesitshalo ebhakedeni lamanzi. Kodwa ngosuku olulandelayo, isiguli esinama-psoriasis singakwazi ukugeza umzimba wakhe ngokuthula ngensipho evamile bese sigeza emkhakheni we-manganese we-pink. Ngemuva kwesonto lezinqubo, ukusakazwa kwe-psoriasis kuyomisa, kanti lesi sifo singase sinyamalale ngokuphelele. Ngaphezu kwalokho, isikhumba sizohlanzwa kakhulu.
Enye ithuluzi eliphumelelayo amaqanda enkukhu, okudingeka uwashaye ngesipuni samafutha we-sunflower. Okulandelayo, engeza i-1 tsp. i-acetic acid bese ibeka ingxube endaweni emnyama, kuyilapho ivala ngokuqinile. Kunconywa ukuba uhambise amabala amancane ngale ngxube ebusuku. Uma lesi sifo singatholakali kakhulu, khona-ke ungakwazi ukuqeda i-psoriasis ngokuphelele.
Ukwelashwa okuhle kwe-psoriasis kwabanye abantu ngamafutha we-flax. Badinga ukumanzisa izindawo eziningi ezibomvu. Le ndlela ingenye yezindlela ezilula zabantu. Okunye okunye amafutha e-flax kungase futhi kusebenze amafutha omuncu we-buckthorn.
Ngisho nokwelashwa kwe-psoriasis ingasetshenziswa i-flaxseed. Kufanele ziphungulwe ngesilinganiso se-isipuni esingu-1 ngendebe yamanzi abilayo bese ishiya ubusuku bonke. Phuza lokhu kuthungwa kufanele kube ngesisu esingenalutho, futhi ngaphambi kokulala kufanele uphuze amaphilisi amabili e-charcoal esebenzayo. Ngenxa yalokhu, ukukhangisa kwenzeka emzimbeni, futhi wonke ama-slags kanye ne-toxin ashiya umzimba, ngenkathi ehlanza isikhumba.
I-Psoriasis isifo "esicasulayo", ngakho-ke kufanelekile ukuyilalela emva kokuqala izimpawu bese uqala ukwelashwa ukuze amabala asakaze wonke umzimba. Kulowo nalowo muntu, izindlela zokupheka ezihlukahlukene zezwe ziphumelela ngezinga elihlukahlukene. Ngakho-ke, ukuthola okusiza ngempela ukuqeda i-psoriasis, kuzomele uzame izindlela eziningi. Ngaphezu kwalokho, ukususa lesi sifo, kufanele ushiye isikhathi esithile, kodwa kungcono unomphela, kusuka emikhuba emibi. Futhi, udinga ukulungisa imenyu yakho (ungayidluli ngokukhaliphile noma enamafutha). Isimo esibalulekile sokulwa ne-psoriasis ukuguga nokubekezela. Kubalulekile ukuletha izinqubo eziqalisiwe kuze kube sekupheleni, ngokuvamile azihlali isikhathi esingaphezu kwamasonto amabili.
Into ebaluleke kunazo zonke akupheleli inhliziyo. Uma ulwa ne-psoriasis, nakanjani uzohamba, futhi izindlela zikazwelonke eziphumelelayo zizomsiza kulokhu.
Ukudla kwe-ABC - ukulahleka kwesisindo esinempilo
Labaznik: zokupheka, isicelo, incazelo
Ukwelashwa kweso ngaphandle kokuhlinzwa
Ama-pancake aphekwe ngama-sausages
Amaski ngokumelene nokuguga kwesilonda
Ukunciphisa Ukulwa Ne-Anti-Wrinkle
Ukuphila komuntu: injabulo noma isijeziso?
Umhlaba wezitshalo zasendlini
"Ubaba" omusha emndenini
Inyama ngesiFulentshi kuhhavini - izindlela zokupheka ezinhle kakhulu